Gịnị bụ terral? | Network Meteorology
Monica sanchez | | Ihe gbasara ihu igwe, Meteorology
Ọtụtụ ụdị ifufe dị iche, otu n'ime ha bụ n'ụsọ oké osimiri. Ọ na - eme na ndagwurugwu ma ọ bụ usoro ugwu, ọ kachasịkarị na mpaghara ndị dị n'ụsọ osimiri nke ugwu gbara gburugburu.
Ka anyi matakwuo banyere ikuku a nke na-aputa karia na ndida nke ebe ugwu Iberian, na karia n'ógbè Malaga.
1 Olee otú terral si malite?
2 E nwere ụdị dị iche iche?
2.1 Na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ
2.2 Oge oyi oyi
3 Terral dị mma maka sọọfụ?
Olee otú terral si malite?
N’abalị, elu oké osimiri na-ejigide okpomọkụ ọ na-ekpokọtara n’ehihie ruo ogologo oge, ebe ala ahụ na-ajụ ngwa ngwa. Ikuku na-ekpo ọkụ nke oké osimiri na-ebili, ikuku oyi na-esikwa n’ala na-anọchi ya.
A na-echekarị na nke a bụ ifufe na-ekpo ọkụ n'ihi na ọ sitere n'Africa, mana eziokwu bụ oge ole na ole ikuku na-ekpo ọkụ nke nwere obere iru mmiri na-abịa site na ndịda. Terral bụ ikuku nke na-abịa site na North ma ọ bụ Northwest.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ụdị ifufe ihe anaghị amasịkarị ihe ọ bụla. Fọdụ na-ekwu na ọ na - eme gị ka enweghi mmetụta, na naanị ọchịchọ ị ga - ewere fan ma jụụ mgbe ị nwere soda, ee, echebere ya.
E nwere ụdị dị iche iche?
Eziokwu bu, ee. Terral, nke nwere akụrụngwa North, bụ ifufe nke kewara abụọ: ọkụ n'oge ọkọchị na oyi n'oge oyi.
Na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ
Nke a na ụdị e ji mara ịbụ kpọrọ nkụ ma kpoo ọkụ. Mgbe ị na-agbadata mkpọda ugwu ndị gbara ndagwurugwu ahụ gburugburu, a na-ekpo ikuku site na mkpakọ adiabatic. Nke a pụtara na, n'ihi mmụba na mberede, ọ na - enweta ume dị ukwuu nke na - enweghị ike ịhapụ ya, yabụ a ga-akwụ ụgwọ ya na thermodynamically na enweghị iru mmiri yana mmụba nke okpomọkụ dị n'ime, nke a maara dị ka Foehn Effect. Ya mere, a na-akwagharị n'elu mmiri n'akụkụ oké osimiri, nke mere na mmiri oyi dị omimi na-ebili, na-akpata na, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ dị oke ọkụ, oke osimiri ahụ na-adịwanye oyi. Ihe omuma a bu ihe amara dika ihe omuma.
Ọnụnọ ya na-akpata okpomọkụ kachasị elu na Peninsula ka edere.
N'aka nke ya, ụdị abụọ ga-ama oke:
Otu nke si na Atlantic ma banye na Galicia, na-agafe Ala Iberia dum.
Onye ọzọ, nke ndị Malaga maara, nke si ọdịda anyanwụ wee tụgharịa, rutere n'ụsọ mmiri nke Portugal, na-akwụsị na mmiri na-abanye n'ebe ugwu Malaga, ebe okpomọkụ na-arị elu. Mgbe ahụ, ọ na-aga n'ihu na-aga na ndagwurugwu Malaga, na-aghọ ifufe dị n'ebe ugwu. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, ikwu na ụdị ifufe a na Malaga bụ ezigbo mpaghara, ọ na-egosi na ụfọdụ eriri mmiri dị n'ụsọ oké osimiri. N'ezie, ọ naghị eru Rincón de la Victoria mgbe niile, nke dị ihe dịka 10km n'akụkụ ọwụwa anyanwụ.
Malagueños na-ekwukarị na "ọdịda anyanwụ na-atụ ụjọ" mgbe ifufe ọdịda anyanwụ chigharịrị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ ma ọ bụ n'ebe ugwu-ọdịda anyanwụ, si otu a na-emepụta ihe nke terral.
Oge oyi oyi
Typedị ifufe a na-adịkarị karịa, nke kachasị na 38% na Jenụwarị na opekempe nke 4% na July. Ọ na-eme n'oge mgbụsị akwụkwọ na oge opupu ihe ubi, na ejiri ya mara ya site na ibu ifufe di ike ma sie ike nke napuru elu igwe kpamkpam. A na-emepụta ya site na oke ifufe dị anya, nke, ọ bụrụ na ọnọdụ ndị kwesịrị ekwesị, nwere ike ịkwado nguzo nke igwe ojii lenticular. N'ezie, mgbe ha na mba ndị ọzọ ha na-ekpori ndụ (ụfọdụ karịa ndị ọzọ) n'oge oyi n'onwe ya, ya na obere okpomọkụ na ọbụna frosts, na Malaga n'ihi ikuku a, ha adịghị mkpa iwepụ uwe ha na-ekpo ọkụ). Typesdị abụọ nwere ike bụrụ oke:
Catabatic ma ọ bụ drainage ifufe: na-esite na gravitation nke ikuku oyi, nke na-agbada na mkpọda ugwu gaa n'ụsọ oké osimiri.
Ọzọ bụ nke kọntinent ikuku na-agafe Europe wee banye Pyrenees. Mgbe ha webatara mmiri, ọgba aghara na-adị n'ugwu, n'igwe ojii, ikuku na-esi.
Terral dị mma maka sọọfụ?
N'agbanyeghị ịmanye onye ọ bụla nọ na Malaga ka ọ gbanwee usoro ọrụ ha kwa ụbọchị, dị ka ndị ọkachamara si kwuo, nke a ọ bụ otu n'ime ifufe kachasị mma maka sọọfụ, ma ọ bụrụ na ọ fụọ obere. N’ezie, e nwere ndị ọkachamara kwenyere na ụbọchị kachasị adaba maka ịme egwuregwu a bụ mgbe oke ikuku anaghị efe.
Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnụ ụtọ egwuregwu kachasị amasị gị, ịga Malaga n'oge ọkọchị bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma 😉
Ruo ugbu a ọpụrụiche anyị na otu n'ime ikuku ikuku kachasị mkpa na Spain, terral. Ihe dị mkpa ... na ihe na-adịghị mma maka ọtụtụ, mana ụdị mpaghara peninsular ebe ha na-enwe ihu igwe Mediterranean na-ekpo ọkụ, na-enweghị oke okpomọkụ kacha nta. Gi onwe-gi, inubekwala banyere ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Gịnị bụ terral?
Kedu ihe bụ ụzarị ultraviolet